Vaovao - Fampitahana ny toetra mampiavaka, ny tombony ary ny fatiantoka amin'ny compressor an'habakabaka telo: compressor air screw, compressor air centrifugal, ary compressor piston reciprocating
Screw karazana rivotra compressor. compressors rivotra visy tsindrona menaka dia ampiasaina amin'ny fitaovana fampangatsiahana. Noho ny firafiny tsotra sy ny ampahany kely mitafy, dia mety manana mari-pana ambany entona ao anatin'ny toe-javatra miasa miaraka amin'ny fahasamihafan'ny tsindry lehibe na ny tahan'ny fanerena, ary manome lubrication be dia be ny refrigerant. Ny menaka (matetika antsoina hoe kapoka mando) dia tsy saro-pady ary manana fepetra tsara amin'ny fikorianan'ny rivotra. Vetivety dia nibodo ny fampiharana compressor reciprocating lehibe izy io, ary nitohy niitatra hatrany amin'ny salan'isa antonony, ary nampiasaina betsaka tamin'ny fitehirizana mangatsiaka sy mangatsiaka. , Fampidiran-drivotra sy teknolojia simika ary fitaovana fampangatsiahana hafa.
Ny compressor centrifugal dia compressor rotary vane (izany hoe compressor turbo). Ao amin'ny compressor centrifugal, ny hery centrifugal omena ny entona amin'ny alàlan'ny impeller mihodina haingana sy ny fiantraikan'ny diffuser omena ny entona ao amin'ny fantsona diffuser dia mampitombo ny tsindry entona. Tany am-piandohana, satria ity compressor ity dia mety amin'ny tsindry ambany sy antonony ary fotoana lehibe mikoriana, dia tsy voamariky ny olona izany. Noho ny fivoaran'ny indostrian'ny simika sy ny fananganana orinasa simika sy refineries lehibe isan-karazany, ny compressor centrifugal dia lasa milina lehibe amin'ny famoretana sy fitaterana entona isan-karazany amin'ny famokarana simika, ary mitana toerana tena manan-danja. Miaraka amin'ny zava-bitan'ny fikarohana dinamika entona, ny fahombiazan'ny compressor centrifugal dia nihatsara hatrany, ary
Noho ny fandrosoana mahomby amin'ny teknolojia fototra toy ny famehezana fanerena avo lenta, ny fikorianan'ny kely sy ny fanodinana impeller tery, ary ny andrin-tsolika maromaro misy menaka, dia namaha olana maromaro teo amin'ny fampandrosoana ny compressor centrifugal ho an'ny fanerena avo lenta sy midadasika, ka ny fampiharana isan-karazany ny centrifugal compressors midadasika Expansion, ka afaka manolo reciprocating compressor amin'ny fotoana maro, ary be dia be ny fanitarana ny fampiharana.
Iray amin'ireo karazana compressors novolavolaina voalohany indrindra izy io. Ny compressor piston dia efa ela no nampiasaina ary izy ireo no compressor be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. Noho ny haben'ny tsindry midadasika, dia afaka mampifanaraka amin'ny angovo midadasika izy io, ary manana tombony amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, cylinders marobe, angovo azo amboarina, fahombiazan'ny hafanana avo, ary mety amin'ny fepetra miasa isan-karazany; Ny fatiantoka dia rafitra sarotra, faritra marefo maro, ary tsingerin'ny fikojakojana fohy , Mora amin'ny famelezana mando, vibration impulse, tsy fahampian-tsakafo.
Screw compressor dia fitaovana fanerena vaovao, izay ampitahaina amin'ny karazana reciprocating:
①Ny milina dia manana rafitra mirindra, boky kely, kely kokoa ny gorodona ary maivana lanja.
②Ny fahombiazan'ny hafanana avo, ny ampahany machining vitsy kokoa, ary ny totalin'ny ampahany compressor dia 1/10 amin'ny karazana piston ihany. Ny milina dia manana kojakoja kely mitafy, azo antoka sy azo antoka ary miasa sy fikojakojana tsotra.
③Tsy misy pulsation ny entona, ary milamina ny fandidiana. Ny vondrona dia manana fototra ambany ary tsy ilaina fototra manokana.
④Mitsindrona menaka ao amin'ny lavaka rotor mandritra ny fandidiana, ka ambany ny mari-pana setroka.
⑤Tsy mahatsapa ny kapoka mando, ny etona mando na ny ranon-javatra kely miditra ao amin'ny milina, tsy misy atahorana ny fahatairana.
⑥ Azo ampiasaina amin'ny tahan'ny fanerena ambony kokoa.
⑦Ny kapoka mahomby amin'ny famatrarana dia azo ovaina miaraka amin'ny fanampian'ny valva slide, ary ny fahaiza-manaon'ny stepless dia azo ovaina amin'ny 10 ka hatramin'ny 100%.
Ilaina ny fitaovana fitsaboana solika sarotra, ary ilaina ny fitaovana toy ny fanasarahana solika sy ny cooler misy menaka misy fiantraikany tsara. Ny tabataba dia somary lehibe, amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 85 decibels, ary ilaina ny fepetra insulation feo.
Raha ampitahaina amin'ny karazana piston, ny karazana centrifugal dia manana hafainganam-pandeha avo, haavon'ny rivotra lehibe, fitafy mekanika kely, kojakoja kely kokoa, fikojakojana tsotra, fotoana maharitra maharitra, vibration kely, fiasa maharitra, fepetra fototra ambany, ary herin'ny vondrona rehefa ny haavon'ny rivotra. dia lehibe. Ny fitaovana dia maivana amin'ny lanjany, kely ny habeny, ary mitana faritra kely. Ny habetsaky ny entona dia azo amboarina tsikelikely amin'ny 30% hatramin'ny 100%. Mora ny famatrarana sy throttling maromaro. Afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fizotran'ny simika sasany izy ary mora ny manao automatique. Ny milina lehibe dia azo tarihina mivantana amin'ny turbine etona indostrialy ara-toekarena, izay manana tombony ara-toekarena ho an'ny orinasa misy etona hafanana fako. Ny fatiantoka dia: matetika ny tabataba be, ny fanjifàna rano mangatsiaka be, ny fandidiana tsy mety dia miteraka firongatry.